Unokuba Nguye Njani UmKristu Oqolileyo?
‘Sibe ngabantu abakhule bagqibelela, silingane noKristu ogqibeleleyo.’—EFESE 4:13, iBhayibhile YesiXhosa Ka-1996.
IINGOMA: 69, 70
Ulwazi oluchanileyo luwanceda njani amaKristu aqolileyo?
AmaKristu aqolileyo ancedisa njani ukuze kubekho umanyano ebandleni?
Ukuba nabahlobo abafanelekileyo kungasinceda njani sibe ngamaKristu aqolileyo?
1, 2. Yintoni eyona nto ifunwa ngawo onke amaKristu? Zekelisa.
YINTONI adla ngokuyijonga umfazi xa ekhetha iziqhamo emarikeni? Udla ngokungajongi ezona zikhulu okanye ezibiza kancinane. Kunoko, ujonga ezinuka kamnandi, ezingabolanga nezingekho krwada. Ufuna iziqhamo ezivuthiweyo.
UmKristu oqolileyo uhlala ekhangela imigaqo yeBhayibhile enokumnceda ayazi into elungileyo nembi
2 Emva kokuba umntu efunde ngoYehova waza wagqiba kwelokuba abhaptizwe, ubuhlobo bakhe noThixo buqhubeka bukhula. Eyona nto ayifunayo kukuba ngumKristu ovuthiweyo, okanye oqolileyo. Oku kuqola akubhekiseli ekukhuleni ngeminyaka. Kubhekisela ekukhuleni ngokomoya, okanye ekubeni nobuhlobo obusondele ngakumbi noYehova. Umpostile uPawulos wayefuna amaKristu ase-Efese aqole. Wawakhuthaza ukuba amanyane elukholweni aze aqhubeke efunda ngoYesu ukuze abe ‘ngabantu abakhule bagqibelela, alingane noKristu ogqibeleleyo.’—Efese 4:13, iBhayibhile YesiXhosa Ka-1996.
3. Ibandla lase-Efese lifana njani nabantu bakaYehova namhlanje?
3 Ibandla lase-Efese lalisele lineminyaka likho xa uPawulos wayelibhalela ileta. Abaninzi kweli bandla babesele bengamaKristu anamava naqolileyo. Kodwa kwakukho abanye ekwakusafuneka baqinise ubuhlobo babo noYehova. Nanamhlanje, abazalwana noodade abaninzi banexesha elide bekhonza uYehova yaye bangamaKristu aqolileyo. Noko ke, abanye ebandleni abakafiki kwelo nqanaba. Ngokomzekelo, nyaka ngamnye kubhaptizwa amawaka abantu, ngoko kukho abantu ekusafuneka bekhulile de baqole. Kuthekani ngawe?—Kolose 2:6, 7.
UNOKUKHULA NJANI UMKRISTU?
4, 5. Ziziphi iindlela angafani ngazo amaKristu aqolileyo, kodwa ziziphi iimpawu afana ngazo onke? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
4 Xa ujonga iziqhamo ezivuthiweyo emarikeni, uye ubone ukuba azifani ncam. Kodwa ke, zikho izinto ezifana ngazo ezibonisa ukuba zivuthiwe. Kunjalo ke nakumaKristu aqolileyo. Awafani ncam. Asuka kumazwe yaye akhule ngeendlela ezahlukahlukeneyo. Awalingani ngeminyaka yaye izinto azithandayo nangazithandiyo azifani. Sekunjalo, onke amaKristu aqolileyo aneempawu ezithile afana ngazo ezibonisa ukuba aqolile. Ziziphi ezinye zazo?
‘Ngaba kukho utshintsho endinokulwenza ukuze ndimxelise ngokusondele ngakumbi uYesu?’
5 UmKristu oqolileyo uxelisa uYesu aze ‘alandele emanyathelweni akhe ngokusondeleyo.’ (1 Petros 2:21) UYesu wathi kubaluleke kakhulu ukuba umntu athande uYehova ngentliziyo, ngomphefumlo nangengqondo yakhe iphela aze athande ummelwane wakhe njengaye siqu. (Mateyu 22:37-39) UmKristu oqolileyo uye azame ukusithobela eso siluleko. Indlela aphila ngayo ibonisa ukuba ulwalamano lwakhe noYehova nokuthanda abantu kubalulekile kuye.
AmaKristu asele ekhulile anokuxelisa ukuthobeka kukaYesu ngokuxhasa abaselula abakhokelayo ngoku (Jonga isiqendu 6)
6, 7. (a) Ziziphi ezinye iimpawu abonakala ngazo umKristu oqolileyo? (b) Ziintoni esimele sizibuze zona?
6 Uthando lolunye lweempawu ezininzi eziboniswa ngumKristu oqolileyo. (Galati 5:22, 23) Uye abonise nobulali, ukuzeyisa nomonde. Ezi mpawu zinokumnceda akwazi ukunyamezela ubunzima engakhange akruquke, aze angalahli themba xa ephoxekile. Xa ezifundela, umKristu oqolileyo uhlala ekhangela imigaqo yeBhayibhile enokumnceda ayazi into elungileyo nembi. Emva koko, xa esebenzisa isazela sakhe esiqeqeshwe yiBhayibhile, uya kutsho akwazi ukwenza izigqibo zobulumko. UmKristu oqolileyo uthobekile, ngoko ukholelwa ukuba iindlela zikaYehova zisoloko zibhetele kunezakhe. * (Funda umbhalo osemazantsi.) Uyazimisela ekushumayeleni iindaba ezilungileyo aze enze konke okusemandleni ukunceda ibandla lihlale limanyene.
7 Kungakhathaliseki ukuba sinexesha elingakanani sikhonza uYehova, ngamnye wethu unokuzibuza lo mbuzo: ‘Ngaba kukho utshintsho endinokulwenza ukuze ndimxelise ngokusondele ngakumbi uYesu? Ngaba kukho iindlela endinokuphucula ngazo?’
“UKUTYA OKUQINILEYO KOKWABANTU ABAQOLILEYO”
8. UYesu wayeyazi kakuhle kangakanani iBhayibhile?
8 UYesu Kristu wayezazi kakuhle iZibhalo. Kwanaxa wayeneminyaka eyi-12, wathetha nabafundisi etempileni esebenzisa iZibhalo. “Bonke abo babemphulaphule bahlala bethe manga kukuqonda kwakhe naziimpendulo zakhe.” (Luka 2:46, 47) Kamva, xa wayeshumayela, wasebenzisa iLizwi likaThixo ngobuchule ukuze azival’ umlomo iintshaba zakhe.—Mateyu 22:41-46.
9. (a) UmKristu oqolileyo uzenzela luphi ucwangciso lokufunda? (b) Kutheni sifunda iBhayibhile?
9 Umntu ofuna ukuba ngumKristu oqolileyo uxelisa uYesu yaye ufuna ukuyazi kangangoko kunokwenzeka iBhayibhile. Uphanda iinyaniso ezinzulu eZibhalweni, kuba esazi ukuba “ukutya okuqinileyo kokwabantu abaqolileyo.” (Hebhere 5:14) UmKristu oqolileyo uye afune ukuba ‘nolwazi oluchanileyo’ lweBhayibhile. (Efese 4:13) Zibuze ke: ‘Ngaba ndiyifunda yonk’ imihla iBhayibhile? Ngaba ndinocwangciso lokufundisisa ndedwa? Ngaba ndilwenza veki nganye unqulo lwentsapho?’ Xa ufunda iBhayibhile, khangela imigaqo enokukunceda uqonde indlela acinga navakalelwa ngayo uYehova. Emva koko sebenzisa loo migaqo xa usenza izigqibo. Loo nto iza kukunceda usondele nangakumbi kuYehova.
10. UmKristu oqolileyo uvakalelwa njani ngeziluleko nemigaqo kaThixo?
10 UmKristu oqolileyo akamele aphelele nje ekuyazini iBhayibhile. Umele azithande iziluleko zikaThixo nemigaqo yakhe. Emva koko uye abonise olo thando ngokufuna ukwenza ukuthanda kukaYehova endaweni yokwenza unothanda. Ude atshintshe indlela aphila, acinga nazenza ngayo izinto. Ngokomzekelo, uxelisa uYesu aze ahlakulele ubuntu obutsha, “obadalwa ngokokuthanda kukaThixo ngobulungisa bokwenyaniso nokunyaniseka.” (Funda amaEfese 4:22-24.) Simele sikhumbule ukuba uThixo wasebenzisa umoya wakhe oyingcwele ukuze alathise ababhali beBhayibhile. Ngoko xa umKristu efunda iBhayibhile, umoya oyingcwele kaThixo umnceda abe nolwazi nothando olungakumbi, aze aqinise ubuhlobo bakhe noYehova.
NCEDISA UKUZE KUBEKHO UMANYANO
11. Xa wayesemhlabeni, uYesu wayengqongwe ngabantu abanjani?
11 UYesu wayefezekile. Noko ke, xa wayelapha emhlabeni, wayengqongwe ngabantu abangafezekanga. Abazali, abantakwabo noodadewabo bonke babengafezekanga. Nabona balandeli bakaYesu basondeleyo kuye babekhe babe nekratshi okanye bazicingele bodwa. Ngokomzekelo, ngobusuku bangaphambi kokuba afe, abafundi bakhe babexambulisana “mayela nokuba nguwuphi na kubo obonakala engoyena mkhulu.” (Luka 22:24) Nakuba babecinga njengabantu abangafezekanga, uYesu wayesazi ukuba kungekudala abalandeli bakhe babeza kuba ngamaKristu aqolileyo baze babumbe ibandla elimanyeneyo. Kwangobo busuku, uYesu wathandazela ukuba bamanyane. Wacela uYise osezulwini ukuba babe banye, esithi: “Kanye njengoko wena, Bawo, umanyene nam yaye nam ndimanyene nawe.” Wongez’ esithi: “Ukuze babe banye kanye njengoko thina sibanye.”—Yohane 17:21, 22.
12, 13. (a) Yintoni injongo yethu thina maKristu? (b) Omnye umzalwana wakufunda njani ukuba negalelo kumanyano lwebandla?
12 UmKristu oqolileyo uncedisa ekubeni kubekho umanyano ebandleni. (Funda amaEfese 4:1-6, 15, 16.) Injongo esinayo thina maKristu kukuba ‘simanyaniswe ndawonye ngemvisiswano,’ ngamany’ amazwi sisebenze kunye ngomanyano. Ukuze kubekho olu manyano, umKristu umele athobeke. Ngoko kwanaxa ejongene nokungafezeki kwabanye, umKristu oqolileyo usebenza nzima ukuze agcine umanyano ebandleni. Ngoko zibuze: ‘Ndiye ndenze ntoni xa umzalwana okanye udade esenza impazamo? Ndiye ndithini xa kukho umntu ondikhathazileyo? Ngaba ndidla ngokuyeka ukuthetha naloo mntu? Okanye ngaba ndiye ndizame ukudala uxolo?’ UmKristu oqolileyo uye azame ukuyisombulula ingxaki kunokuba kwayena abe yingxaki ebantwini.
13 Khawucinge ngomzekelo kaUwe. Wayedla ngokukhathazeka xa abazalwana noodade besenza izinto ngenxa yokungafezeki. Kodwa wagqiba kwelokuba khe afunde ngobomi bukaDavide esebenzisa iBhayibhile nencwadi ethi Insight on the Scriptures. Kwakutheni ukuze akhethe uDavide? Kuba kaloku noDavide wayekhe wanengxaki nabanye abakhonzi bakaThixo. Ngokomzekelo, uKumkani uSawule wazama ukumbulala uDavide, abanye abantu bazama ukumxuluba ngamatye, nkqu nomkakhe wamenza intlekisa. (1 Samuweli 19:9-11; 30:1-6; 2 Samuweli 6:14-22) Kodwa kungakhathaliseki ukuba abantu babemenza ntoni, uDavide wayemthanda uYehova yaye emthemba. Wayenayo nenceba. U-Uwe uyavuma ukuba naye kwakufuneka enze okufanayo. Ukufundisisa kwakhe iBhayibhile kwamnceda wabona ukuba kufuneka atshintshe indlela avakalelwa ngayo ngokungafezeki kwabazalwana bakhe. Kwafuneka ayeke ukuhlala ecinga ngeempazamo zabo aze abe negalelo kumanyano lwebandla. Ngaba nawe ufuna ukwenza okufanayo?
KHETHA ABAHLOBO ABENZA UKUTHANDA KUKATHIXO
14. Wayebakhetha njani uYesu abahlobo?
14 UYesu Kristu wayenobubele ebantwini. Amadoda, abafazi, abaselula, abadala nkqu nabantwana babeziva bekhululekile xa bekunye noYesu. Kodwa wayengenzi nje xa ekhetha abahlobo abasondeleyo. Wathi kubapostile bakhe: “Ningabahlobo bam ukuba nenza oko ndiniyalela kona.” (Yohane 15:14) UYesu wakhetha abahlobo abasondeleyo phakathi kwabo babemlandela ngokunyaniseka nababethanda uYehova yaye bemkhonza. Ngaba nawe ukhetha abahlobo abathanda uYehova ngentliziyo epheleleyo? Kutheni ibalulekile nje loo nto?
Ngaba nawe ukhetha abahlobo abathanda uYehova ngentliziyo epheleleyo?
15. Ukuba nabahlobo abangamaKristu aqolileyo kungabanceda njani abaselula?
15 Iziqhamo ezininzi zivuthwa kakuhle xa ilanga lifudumele. Ngendlela efanayo, uthando lwabazalwana noodade lunokukunceda ube ngumKristu oqolileyo. Ngaba uselula yaye usacinga ukuba mawenze ntoni ngobomi bakho? Ukuba kunjalo, kuya kukunceda ukukhetha abahlobo abanethuba bekhonza uYehova nabalimanyanisayo ibandla. Kusenokwenzeka ukuba baye bajongana neengxaki ebomini babo okanye banyamezela izilingo ekukhonzeni kwabo uYehova. Bangakunceda ukhethe obona bomi bonwabisayo. Xa uchitha ixesha nabo, banokukunceda wenze izigqibo zobulumko uze ube ngumKristu oqolileyo.—Funda amaHebhere 5:14.
16. Omnye udade wancedwa njani ngabantu abadala xa wayeselula?
16 UHelga ukhumbula ukuba xa wayekunyaka wokugqibela esikolweni, abantwana abaninzi eklasini yakhe babethetha ngezinto abafuna ukuzenza ebomini. Abaninzi babefuna ukuya eyunivesithi ukuze babe nemisebenzi erholisayo. Noko ke, uHelga wancokola nabahlobo abaqolileyo ebandleni lakhe. Uthi: “Abaninzi kubo babebadala kum, yaye bandinceda gqitha. Bandikhuthaza ukuba ndibe kwinkonzo yexesha elizeleyo. Emva koko, ndakwazi ukuchitha iminyaka emihlanu ndinguvulindlela. Ngoku, sekudlule iminyaka, yaye ndiyavuya kuba ndakwazi ukuchitha ixesha elininzi kubutsha bam ndikhonza uYehova. Andinasizathu sakuzisola ngaloo nto.”
17, 18. Singamkhonza njani ngeyona ndlela ifanelekileyo uYehova?
17 Xa sixelisa uYesu, siya kukhula sibe ngamaKristu aqolileyo. Siya kusondela nangakumbi kuYehova, yaye siya kukunqwenela ngakumbi ukumkhonza. Umntu umkhonza ngeyona ndlela ifanelekileyo uYehova xa eqolile. UYesu wabakhuthaza ngala mazwi abalandeli bakhe: “Malukhanye ngokunjalo ukhanyiselo lwenu phambi kwabantu, ukuze babone imisebenzi yenu emihle baze bazukise uYihlo osemazulwini.”—Mateyu 5:16.
18 Siye safunda indlela anokuba luncedo ngayo umKristu oqolileyo ebandleni. UmKristu ubonisa ukuba uqolile nangendlela asisebenzisa ngayo isazela sakhe. Isazela sethu singasinceda njani senze izigqibo zobulumko? Singazihlonela njani izazela zabanye? Le mibuzo siza kuyiphendula kwinqaku elilandelayo.
^ isiqe. 6 Ngokomzekelo, abazalwana abasele bekhulile nabanamava basenokucelwa ukuba bayeke isabelo esithile baze baxhase abazalwana abaselula abanikwe eso sabelo.
UmKristu oqolileyo uyazithanda iziluleko zikaYehova. Akafuni ukwenz’ unothanda, kunoko ufuna ukwenza ukuthanda kukaYehova, yaye uxelisa uYesu ngokusondeleyo ngendlela athetha nazenza ngayo izinto. Ukhangela imigaqo eBhayibhileni enokumnceda ayazi into elungileyo nembi, yaye uzama kangangoko anako ukuba kubekho umanyano ebandleni